Demonstrations at Burmese Embassy and French Embassy on 27 May 09
ထိုင်းနိုင်ငံ နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့မှ ဆန္ဒပြပွဲများ နှင့် စင်္ကာပူမှ ဆုတောင်းပွဲ
Facebook ပေါ်မှာ မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ပေးပို့တဲ့ Message တစ်ခုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျား ...
Just Joe သူ့ရဲ့ စိတ်ကူးအကောင်အထည်ဖော်မှု့ကို လေးစားသောအားဖြင့် အင်တာနက်ပေါ်မှ အမေစု၏ ဓာတ်ပုံများကို စုစည်းပြီး အောက်ပါ Profile picture များကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ မိတ်ဆွေများ အသုံးပြုနေသော Forum များ၊ Social Networking site များ၊ Messenger များတွင် Avata…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မိမိ၏ ထင်ရာထင်ကြေး တစ်ခုတည်းနှင့် မှတ်ချက်ပေးသော ဟောင်ကောင်မှ ကောင်စစ်ဝန်ကို အင်မတန် အံ့သြ ရွံရှာမိပါတယ်။ မိမိ၏ ဂုဏ်ပုဒ်၊ လက်ရှိထမ်းဆောင်နေသည့် ရာထူးကိုမှ အားမနာ သူတစ်ပါးကို မသေချာမရေရာပဲ အပြစ်တင်ပုတ်ခတ်တတ်သော အောက်တန်းကျသည့်အကျင့်မျိုးရှိနေသည်မှာ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနှင့်ကြည့်လျှင် ရွံ့ရှာဖွယ်ရာ အပြုအမူတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခွေးကျွေးလို့ ၀က်မစား၊ ခွေးလန့်ပြီး သုံးရက်ဖျားမည့် သောက်ခွက်နှင့် ခွေးလောက်မှ အဆင့်အတန်းမရှိသည့် စကားများကို ပြောဆိုတတ်သည့် ထိုကောင်စစ်ဝန်၏ ညံ့ဖျင်းသေးသိမ်သည့် စကားများကို လုံးဝ လုံးဝ ရှုံ့ချ ကန့်ကွက်ပါသည်။
News Via : Irrawady
Thailand, 19 May 2009
Thailand, as the ASEAN Chair, expresses grave concern about recent developments relating to Daw Aung San Suu Kyi, given her fragile health. In this connection, the Government of the Union of Myanmar is reminded that the ASEAN Leaders had called for the immediate release of Daw Aung San Suu Kyi. Furthermore, the Government of the Union of Myanmar, asaresponsible member of ASEAN, has the responsibility to protect and promote human rights. It is therefore called upon to provide timely and adequate medical care to Daw Aung San Suu Kyi as well as to accord her humane treatment with dignity. With the eyes of the international community on Myanmar at present, the honour and the credibility of the Government of the Union of Myanmar are at stake. Thailand, as the ASEAN Chair, reaffirms ASEAN’s readiness to contribute constructively to the national reconciliation process and the peaceful transition of democracy in Myanmar.
Via : http://www.ase…
ယူကေရောက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုများစုပေါင်းပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုပွဲတစ်ခုကို ယနေ့နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ၁ နာရီထိ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးမှ မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီး အေးချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ နေ့လည် ၁ နာရီမှ နောက်နေ့နေ့လည် ၁ နာရီထိ ၂၄ နာရီကြာ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲကျင်းပပြီး ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်လျှက်ရှိပါတယ်။
Forward email မှတစ်ဆင့်ဝင်လာသော ဓာတ်ပုံများကို တစ်ဆင့်ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ မြန်မာများသာမက မြန်မာ့အရေးစိတ်ဝင်စားသူ နိုင်ငံခြားသားများပါ ပါဝင်လက်တွဲဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ အလားတူစွာ မိတ်ဆွေလည်း အောက်ပါ ဓာတ်ပုံတစ်ခုချင်းစီကို Click နှိပ်ပြီး Form ဖြည့်စွက်ကာ တစ်ဘက်တစ်လမ်းမှ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါပြီ။
လန်ဒန်ရောက် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ... မေလ ၁၈ ရက်နေ့၊ တနင်္လာနေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် Demonstration သို့ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်အနေဖြင့် ပါဝင်တက်ရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
အောက်ပါ ဓာတ်ပုံတွေကတော့ မေလ ၁၅ ရက်နေ့ Foreign Office မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Demonstration မှ ဓာတ်ပုံတစ်ချို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ - CMS
ဆန္ဒပြပွဲ ဓာတ်ပုံများကို လွတ်လပ်စွာ ကူးယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
တေးရေး - မင်းချစ်သူ
တေးဆို - ထက်နေခြည်
Melody World 1 ထဲက သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ တစ်ချို့သီချင်းတွေက တစ်ခါနားထောင်ရုံနဲ့ မကြိုက်ဘူး။ နှစ်ခါသုံးခါလောက် နားထောင်မိမှ ကြိုက်သွားတယ်။ အဲဒီ Album ထဲက ကိုကိုမောင်ရဲ့ "မချစ်နဲ့တော့" သီချင်းကတော့ တစ်ခါနားထောင်ရုံနဲ့ ကြိုက်သွားတယ်။ သီချင်းစာသားကိုတော့ ဒီနေရာမှာ ရယူပါ။
မိမိရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို artwork အနေနဲ့ ပုံစံပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် BeFunky.com က ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ မိမိလိုချင်တဲ့ Design ပုံစံတွေကို Click နှိပ်တတ်ရုံဖြင့် ဖန်တီးရယူနိုင်ပါတယ်။
အိမ်ဖြူတော်မှ Update ဖြစ်နေသော ဓာတ်ပုံများကို ကြည့်ရှူ့ခံစားနိုင်မည့် Photostream တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်က အကြီးအကဲတွေလည်း အဲလိုဆိုဒ်လေးတစ်ခုလောက်လုပ်ပြီး ဓာတ်ပုံတွေတင်ပေးလိုက်ရင် .... အင်း ... တက်လာလိုက်မည့် comment တွေ .... ။
YouTube video တွေကို MP3 ပြောင်းပေးတဲ့ service တစ်ခုပါ။
High Quality အနေနဲ့လည်း ပြောင်းပေးနိုင်လို့ တော်တော်လေး အသုံးဝင်ပါတယ်။ တွေ့ဖူးသမျှ converter တွေထဲမှာတော့ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။